Ndeipi 404 kukanganisa uye ndeipi mhedzisiro yacho? | ECommerce nhau
Ndeipi 404 kukanganisa uye ndeipi mhedzisiro yacho?
Nechokwadi chese kuti pane kanopfuura kamwe chiitiko iwe wakasangana neshoko rinoti "404 kukanganisa" uye iwe hauzive zvarinoreva chairo. Zvakanaka, pazvinoonekwa pachiratidziri, kungave kubva pakombuta yega kana kubva kune zvimwe zvigadzirwa zvehunyanzvi, izvo zvavari kukuudza iwe ndezvekuti peji rauri kuenda parizvino harisi kushandiswa. Inogona kuve yakarongedzwa pasi pemhando dzakasiyana: senge, semuenzaniso, "404 haina kuwanikwa" kana "404 peji hariwanikwi".
Chekutanga pane zvese, haufanire kunetseka zvakanyanya nekuti zvinoonekwa neakawanda frequency uye ndiyo chete yekutanga iyo inogona kukutungamira kuvhura maalarm ese nezve kukundikana mumidziyo yako yemakomputa. Asi iyo ndeimwe yemakanganiso akajairika aunogona kusangana nawo paunenge uchitsvaga nzvimbo zhinji paInternet. Kubva pane ino maonero, haufanire kuve nemhedzisiro nechizvarwa chemurairo uyu.
Asi zvakakosha kuti iwe uzive kuti chiito ichi chinogona kukanganisa zvakanyanya pakumiswa kwewebhu peji. Kunyanya kana iwe uchizvipira iwe kune zvemagetsi zvekutengeserana kana zvimwe zviitiko zvine zvakafanana maitiro. Nekuti ipapo, hongu, matambudziko anozove makuru uye kana iri rako bhizinesi rinogadzira iyo 404 kukanganisa, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekugadzirisa icho nekukurumidza sezvazvinogona. Nenzira yakajeka, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iko 404 kukanganisa ikodhi yemamiriro inotumirwa kubva pawebhu server kune browser. Ndizvozvo, uye kuti uzvinzwisise zvirinani: mushandisi anoedza kuisa iyo peji rewebhu.
1 Mhedzisiro yekuonekwa kweye 404 kukanganisa
2 Ungagadzirisa sei dambudziko iri?
3 Dhizaina peji rewebhu peji
4 Mhedzisiro nekuonekwa kweshoko iri
Mhedzisiro yekuonekwa kweye 404 kukanganisa
Ehezve, inogona kuumba inopfuura rimwe dambudziko rewebsite yechitoro chako chedigital, uye nekudaro zviri nyore kuti uone chiito ichi kubva pakutanga. Saka kuti nenzira iyi iwe uri muchinzvimbo chekutora akateedzana matanho. Semuenzaniso, mune dzinotevera kesi dzatinokufumura pazasi:
Vashandisi vako kana vatengi vanozove nezviitiko zvakashata zvakanyanya nezve izvo zvinomirirwa nechirongwa chako chedigital
Iko hakuna kupokana kuti icho chinhu chinogona kukuvadza yako hunyanzvi zvido.
Iwe unomhanyisa njodzi yekurasikirwa nevatengi uye chii chingave chakanyanya kuipa ndechekuti kutengesa kunodzikira zvakanyanya kubva panguva chaiyo chaiyo.
Kubva pane injini dzekutsvaga vanogona kududzira kuti kuchengetedza kwewebhu hakusi kwakanyanya kukodzera. Kwete zvishoma zvishoma uye nekudaro uve nedambudziko rinopfuura rimwe kubva zvino zvichienda mberi.
Mufananidzo watinopa kunze kwenyika hausi wakanakisisa pane zvese uye zvakati wandei kana izvo zvatinonyatsoda kutengesa zvigadzirwa zvedu, masevhisi kana zvinyorwa.
Iwe unogona kunge usina kuziva izvi zvakakosha: asi zvinogona kukanganisa zvakaipa PageRank yewebhusaiti yechitoro chako chepamhepo.
Haisi iyo yakanyanya kunaka tsamba yekuzivisa kune vatengi kana vashandisi, asi pane zvinopesana iwe urikupa zvishoma zvishoma yakanaka chimiro nezve yako bhizinesi bhizinesi.
Nemaonero evanhu vanoedza kushanyira peji redu, hapana mubvunzo kuti a kurasikirwa kwekuvimbika uye kuvimba. Izvi zvinoshandura kune kwakanyanya kudonha mukutengesa.
Haisi iyo nzira yakanakisa yekushambadzira bhizimusi repamhepo, asi zvinogara zvichikuunzira matambudziko emarudzi ese uye zvisikwa kudzamara ukwanisa kugadzirisa ichi chiitiko chakakosha mune yemagetsi commerce chikamu.
Ungagadzirisa sei dambudziko iri?
Panguva ino iwe unongofanirwa kutsvaga mhinduro kuitira kuti iko kukanganisa kusazoonekwazve pawebhusaiti yako. Kune izvi iwe une akati wandei marongero aunogona kushandisa kubva zvino zvichienda mberi. Zvichava zvakakosha kuti iwe uzviite sezvo pakupedzisira peji rako rewebhu rinogona kurangwa nemajini ekutsvaga uye kunyanya neSEO.
Basa redu rekutanga richava rekuongorora zvakadzama kana isu paine chero akaputsika ma link. Nechinangwa chekuigadzirisa nekukasira kana, kutadza izvozvo, kuchibvisa zvachose. Iwe unofanirwa kufunga kuti iko kudhonza pane zvaunofarira mukati medhijitari yekutengeserana.
Nepo pane zvinopesana, iwe une dzimwe nzira dzekumisa izvi zvinongedzo kuitira kuti nenzira iyi mameseji erudzi "404 asingawanikwe" kana "404 peji risingawanikwe" asaonekwe. Izvo zviri kumagumo ezuva kuti mhando iyi yemitambo yakakosha ndeyei.
Ichi chiridzwa chinoratidza mhosho 404 meseji.Naizvozvo ivo vanobva vangoerekana varatidzwa uye, kana vagadziriswa, vanogona kumakwa sekugadziriswa. Ehezve, haisi mhinduro chaiyo, asi zvirinani zvinoshanda kugadzirisa matambudziko anogona kugadzirwa nekuitwa kwayo.
Kuburikidza nemamwe mafomu
Ikozvino pane nhevedzano yekushandisa pamusika wezvigadzirwa zvetekinoroji izvo zvinobvumidza zvakadzama uye zvakakwana ongororo kuti zviitwe pane yega yega yemabatanidzwa anoita peji rewebhu. Izvi zvichatibatsira kuziva panogona kubva dambudziko redu uye zvarinoshandura mukuonekwa kweshoko iri rakaomarara. Ndichiri kune rimwe divi, ivo vanozivikanwa nekugona kuona ekunze kana emukati mapeji ane 404 kukanganisa.
Nekushandisa kweaya masisitimu ekutsvaga iwe unodzivirira aya mameseji anokunetsa zvakanyanya uye anogona kuchinja shanduko yebhizinesi rako kana chitoro chepamhepo kubva ikozvino pachiratidziri. Ehezve, iwe hausisina zvikonzero zvekuzviita nekukurumidza zvisati zvanyanyisa.
Dhizaina peji rewebhu peji
Ndiyo imwe yedzimwe sarudzo dzaunogona kubva ikozvino. Haisi mushonga wakanyanya kugadzirisa iri dambudziko rehunyanzvi. Asi zvirinani zvinokutendera kubva panguva yekutanga etsvaga pakupedzisira iyo chaiyo HTPP kodhi. Haisi iyo yakanyanya kunaka, asi chimwe chinhu chinhu, sezvavanotaura zvisina kunaka. Uye zvakare, iwe unozowana yakawanda yakanyanya aesthetic uye inoratidzira aesthetic kupfuura kusvikira zvino uye ichi chinhu icho vatengi kana vashandisi vanogara vachikoshesa. Kunyanya kana iri webhusaiti inoenderana nekutengeserana kwedhijitari.
Paunenge uri kune rumwe rutivi, haugone kukanganwa kuti mamwe mapuratifomu ezvinyorwa anozvitumira otomatiki aya mameseji. Kana iwe usiri kuda kuzviona iwe mune ino maitiro, zviri nani kuti iwe usarudze kune yakachengeteka domeini uye mune ino mamiriro iwe ausingade kuti aitike haigoneke. Chokwadi izvi zvinoda kuita kuyedza kukuru kwemari, asi ichave ichikosha chaizvo mukati nepakati nepakati. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti iwe unenge wakadzivirirwa zvakanyanya kubva kuzviitiko izvi munhau yetekinoroji.
Mhedzisiro nekuonekwa kweshoko iri
Ehezve, iwo mameseji "404 haana kuwanikwa" kana "404 peji risingawanikwe" anogona kukanganisa commerce kana online chitoro. Kupfuura zvingaratidzika kwauri kubva pakutanga uye nekudaro iwo mamiriro ezvinhu aunofanirwa kudzivirira mune ese mamiriro. Nekuti mukuita, vanogona kuve nezvinoreva zvinotevera zvatichazokutsanangurira:
Iko kukanganisa kwehunyanzvi uko kunozopedzisira kwakanganisa hukama hwako nevatengi kana vashandisi.
Zvinogona kutungamira mukumiswa kwezvimwe zvibvumirano muhukama hwebhizinesi rako nevatengi.
Iwe haugone kubvumira chero chiitiko, senge ichi, kukanganisa mushandirapamwe wekushambadzira wekusimudzira zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu.
Mufananidzo wauchange uchipa kunze kwenyika hausi wakanakisisa pane zvese uye mupfungwa iyi unofanirwa kufunga kuti vatengi vazhinji vanotenga nemaziso avo. Edza nenzira dzose kuti zano iri rinotevedza nzira dzakafanana kusvika pari zvino.
Izvo hazvigone kwazvo, asi kana aya mameseji akaonekwa, unogona kurangwa nemainjini ezvinyorwa zvemukati.
Icho chiitiko chidiki, asi hachina hanya nekugadzira musoro usinganzwisisike kubva zvino zvichienda mberi. Rigadzirise nekukurumidza sezvazvinogona kuti urege kuenda kumberi mune ayo mhedzisiro.
Hazvina kumbofadza vatengi kana vashandisi kuti vaone "404 isina kuwanikwa" kana "404 peji risingawanikwe" mameseji. Nekuti mukupedzisira vanozoenda kune imwe duraini inovapa yakakwira nhanho yekuchengetedza kuita kwavo mashandiro kana kutora pamusoro peInternet.
Sezvaungave iwe waona, haisi iyo yakaipa kwazvo yematambudziko iwe aungave uine pawebhusaiti yako. Asi kana sekuchengeta zvachose nekuti iwe unofanirwa kuziva kuti dura rako harisi rako pachako, asi inyanzvi. Uye izvo saka kutengesa kwako kunoenderana nekuchengetedzwa kwayo kwakapfuura makore.
Paunenge uri kune rumwe rutivi, haugone kukanganwa kuti mamwe mapuratifomu ezvinyorwa anozvitumira otomatiki aya mameseji. Kana iwe usiri kuda kuzviona iwe pachako mune ino maitiro, zviri nani kuti iwe usarudze kune yakachengeteka domeini uye mune ino mamiriro iwe ausingade kuti aitike haigoneke. Chokwadi izvi zvinoda kuita kuyedza kukuru kwemari, asi ichave ichikosha chaizvo mukati nepakati nepakati. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti iwe unenge wakadzivirirwa zvakanyanya kubva kuzviitiko izvi munhau yetekinoroji. Ehezve, iwe hausisina zvikonzero zvekuzviita nekukurumidza zvisati zvanyanyisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Analytics, CRM uye Big Data » Ndeipi 404 kukanganisa uye ndeipi mhedzisiro yacho?
Chii chinonzi Google Pay?
Mhosva mukutenga kuburikidza neEcommerce